Amabali eNative Homestay Tribal ilifa
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguNativestories
· Iibhedi eziyi-36
UNativestories ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Isiseko senkampu egqibeleleyo ye-Dzukou okanye i-Mt. Japfu trekking kunye ne-Hornbill fest kunye ne-Kisama Heritage Village 1 KM kude. Amava amaNaga ayinyaniso esiwabelana nondwendwe. Okwenyani, kushushu kwaye kusondele kwindalo. Ayiloshishini lehotele.
Ikhaya lethu liphakathi kanye kuyo yonke imisebenzi yenkcubeko kunye nelifa lemveli yamaNaga. Ibekwe kwincam yeNtaba iJapfu, inoxolo kwaye ibukeka kodwa ikwindawo ekulungeleyo.
Ukuyonqena nje kumasimi amahle eterrace ngumgama nje onokuhanjwa.
Ibanzi kwaye iyilwe ngendlela yokuphila yesizwe samaNaga engqondweni. Uya kuba neenketho ezininzi kunye namagumbi onokukhetha kuwo. Kwiintaba, imisebe yegolide yokuphuma kwelanga kunye nokufudumala idlulileyo njengeGolide kwaye sifumana okokuqala. Uphahla lunokuba yindawo ebukekayo yokwenza i-stretch yakho okanye i-yoga.
Ilali yelifa leKisama ikwikhilomitha enye enesiqingatha kuphela ukusuka apho. Unokuhambahamba apho ngorhatya ekutshoneni kwelanga okumnandi. Iindawo ezininzi zokutyela ezilungileyo kakhulu kunye neekhefi zikufuphi nje. Ukuba ufuna imbono yeentaka kwiinduli kunye neentaba kukho iindlela zokuhamba kunye neendlela onokuthi uzenze iyure okanye ngaphezulu. Awudingi ukuya e-Bali kumasimi erayisi kuba siya kukuthatha uhambe kufutshane kwaye ufumane imifuno ukupheka isidlo sakho sangokuhlwa.
Umbuki zindwendwe ngu- Nativestories
Siya kuthanda ukuva amabali akho kwindawo yomlilo ekhitshini okanye kwibhonfire. Ukuba unomdla kuwe, singathanda ukwabelana ngeendlela zethu zokuphila zezizwe kunye nelifa lethu losapho elinxibelelana kwiminyaka engama-200 eyadlulayo okanye unxibelelwano lukatatomkhulu wethu kwiMfazwe yeHlabathi ye-2 iintsomi uNetaji Subhash Bose kunye noGeneral Sato waseJapan.
Siya kuthanda ukuva amabali akho kwindawo yomlilo ekhitshini okanye kwibhonfire. Ukuba unomdla kuwe, singathanda ukwabelana ngeendlela zethu zokuphila zezizwe kunye nelifa lethu lo…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kigwema, Kohima